China 430 ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara eriri igwe rụpụta na ụlọ ọrụ | Huaxiao
430 bụ igwe anaghị agba nchara, 430 16Cr bụ ụdị ndị nnọchi anya ígwè nchara nchara, thermal mgbasa ọnụego, magburu onwe formability na ọxịdashọn na-eguzogide. Ngwaọrụ na-eguzogide ọkụ, ndị na-ere ọkụ, ngwa ụlọ, ụdị 2 cutlery, kichin sinks, mpụga mkpụbelata ihe, bolts, akụ, CD mkpara, hụ na i meziri. N'ihi ọdịnaya chromium ya, a na-akpọkwa ya 18/0 ma ọ bụ 18-0. Tụnyere 18/8 na 18/10, na chromium ọdịnaya bụ ubé ala na ekweghị ekwe na-ebelata ya.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 430 Na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara , 430 HRC
430 Otu ọkwa si na mba dị iche iche
430 Chemical mpaghara ASTM A240:
C: .012, Nke: ≤Ogbe Mn: ≤1.8, Cr: 16.0～18.0, Ni: <0.75, N: .00.03, P: ≤0.04 N≤0.1
430 n'ibu ihe onwunwe ASTM A240:
Mbelata nke Mpaghara ψ (%): ≥50
Njupụta: 7.7g / cm3
Ebe mgbaze: 1427 Celsius C
Ngwa banyere 430 igwe anaghị agba nchara
1, 430 igwe anaghị agba nchara na-bụ-eji maka ụlọ mma, mmanụ burner components, ngwa ụlọ, mmiri ngwa.
2. Tinye nchara 430F nwere arụmọrụ ọnwụ n'efu na nchara 430, nke a na-ejikarị akpaka lathes, bolts na akụ.
3. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye Ti ma ọ bụ Nb na 430 igwe anaghị agba nchara, belata C, nwere ike nweta ọkwa 430LX, arụmọrụ na ịgbado ọkụ nwere ike ịbawanye mma, A na-ejikarị ya maka tankị mmiri ọkụ, usoro mmiri ọkụ ọkụ, ngwa ngwa, ịdị ọcha nke ụlọ, ngwa, ufe, wdg.
Ntụle dị mfe banyere 304 na 430
304 bụ igwe anaghị agba nchara nwere nickel, a na-ejikwa arụmọrụ ya n'ozuzu ya. N'ihi ọdịnaya nickel, ọnụahịa ya adịghị ala. 430 bụ akwa-chromium ferritic anaghị agba nchara na enweghị nickel. Ebu ụzọ mepụta ma kwalite ya site na igwe igwe JFE nke Japan. N'ihi na ọ nweghị nickel, ọnụahịa a anaghị emetụta mba dị iche iche na-akwụ ụgwọ nickel. Ọnụahịa ahụ dị obere, mana n'ihi ọdịnaya chromium ya dị elu, ọ na-eguzogide nrụrụ. Omume magburu onwe ya, nchekwa nri adịghị ike karịa 304. N'ihi ụgwọ ya dị ala na nso-304 arụmọrụ, ọ dị ugbu a n'ọnọdụ 304 ọzọ n'ọtụtụ ngwa.
Nke gara aga: 410 410s na-ekpo ọkụ akpọrepu igwe anaghị agba nchara
Osote: NO.4 igwe anaghị agba nchara eriri igwe